Iindaba - Kutheni ugcino lomkhenkce?
Inkqubo yokuGcina uMkhenkce Sebenzisa umkhenkce ukugcina amandla ashushu. Ebusuku, inkqubo ivelisa umkhenkce ukugcina ukupholisa, kwaye emini bakhupha ukupholisa ukuhlangabezana neemfuno zombane eziphezulu.
Inkqubo yokugcina umkhenkce iqulathe iyunithi ebandayo yamanzi, inqaba yokupholisa, sokufudumeza umzimba, impompo yamanzi, isixhobo sokugcina umkhenkce kunye nenkqubo yolawulo njl.
INKQUBO YOKUGCINA I-ICE UKUSEBENZA KOKUHAMBA
Inkqubo epheleleyo yokugcina kunciphisa iindleko zamandla okuqhuba le nkqubo ngokucima ngokupheleleyo ii-chiller ngexesha lokulayisha okuphezulu. Iindleko ezinkulu ziphezulu, njengoko le nkqubo ifuna chiller ethe kratya kunaleyo isuka kwinkqubo yokugcina inxenye, kunye nenkqubo yokugcina umkhenkce enkulu. Inkqubo yokugcina umkhenkce ayibizi mali ininzi kangangokuba iinkqubo zokugcina ezihlala zihlala zikhuphisana noyilo oluqhelekileyo lomoya
Izibonelelo zenkqubo yemeko yomoya yokugcina i-Ice xa kuthelekiswa nenkqubo yemeko yomoya eqhelekileyo zezi zilandelayo:
1) Ukugcina iindleko zokusebenza kuyo yonke inkqubo yemeko yomoya, nceda umniniyo
2) Ukuncipha komthamo ofakiweyo wemeko yomoya wonke, ukunciphisa ukutyalomali kwezixhobo zombane
3) Nika ubushushu obusezantsi bamanzi, ukuze uqonde umahluko omkhulu kwiitekhnoloji yokuhambisa amanzi kunye netekhnoloji yokuhambisa umoya obushushu obuphantsi
I-4) Kwisicelo esineemfuno ezikhuselekileyo zokhuselo, imeko yomoya yokugcina umkhenkce inokuba sisibonelelo esibandayo esingxamisekileyo, kwaye xa kucinyiwe igridi, kuphela ziimfuno ezincinci kwigunya lokuzimela. Inokuqhuba kuphela impompo yokunyibilika komkhenkce ukubonelela kubanda kubasebenzisi.
5) Nciphisa umthamo kunye namandla efakiweyo yeyunithi yefriji, iimpompo, iinqaba zokupholisa.
6) Amandla okususa ubumnandi.
7) Usebenzisa ubushushu obufihlakeleyo, umthamo wokugcina mkhulu kodwa uhlala kwindawo encinci
8) Isiphumo sokupholisa ngokukhawuleza
Ukugcina iindleko zokugcina
Umzi mveliso weMichiza
Isimo soMthwalo woMoya:
Inkqubo esebenza kwisithuba seeyure ezingama-24, ngakumbi xa impendulo yemichiza isenzeka, ngexesha elifutshane, umthwalo omkhulu wokupholisa uyafuneka, elinye ixesha kukho kuphela iipesenti ezingama-20 zomthwalo omkhulu.
Umthwalo opholisayo xa kusenzeka ikhemikhali: 420-RT / Hr
Umthwalo oqhelekileyo wokupholisa: 80-RT / Hr
[Umatshini wokupholisa oqhelekileyo]
Umthamo wokuvelisa amanzi e-Ice: 420 RT
Ukusetyenziswa kwamandla kweeyunithi zamanzi anomkhenkce kunye nezixhobo ezincedisayo: 470 KW
[Umcocisi oGcina uMkhenkce]
Umthamo wokuvelisa amanzi e-Ice: 80 RT / Hr （yoMthwalo oPholileyo oQhelekileyo）
Indawo yokugcina i-Ice umthamo: 20 RT
Umthamo wetanki: 350 RT-Hr
Ukusetyenziswa kwamandla kweeyunithi zamanzi anomkhenkce kunye nezixhobo ezincedisayo: 127 KW （27 ％）
Xa ixesha liqhelekileyo, i-80RT Ice Water Generater iya kubonelela kubanda, iYunithi yokuGcina uMkhenkce engama-20RT iya kuqhubeka nokuqhuba kangangeyure ezingama-22 ukugcina umthamo we-350RT-Hr wokupholisa. Xa impendulo yamachiza isenzeka, ukugcinwa kwe-350RT kunye ne-80RT Ice Water Generater kuya kusebenza kunye ukubonelela nge-350RT + 80RT = 430 RT -Hr amandla okupholisa.
I-SPL YOKUFUNDA UKUGCINWA
UMZEKELO NO. KUNYE NEDATHA YOBUGCISA